शाकाहारी हुनुहुन्छ भने प्रोटिनको अभाव हुनसक्छ है – MEDIA DARPAN
शाकाहारी हुनुहुन्छ भने प्रोटिनको अभाव हुनसक्छ है
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २५ भाद्र २०७५, सोमबार १४:१३
हामी भन्छौं, शारीरिक स्वास्थ्यका लागि माछामासुको सेवन राम्रो होइन ।
तर, माछामासुको विकल्प के त ?
किनभने माछामासुबाट हामी जुन पोषक तत्व प्राप्त गर्छौं, त्यो अरु कुन खाद्यपदार्थबाट मिल्छ ? यसबारे पनि हामीले जान्नुपर्छ । किनभने स्वस्थ्यका लागि कतिपय खानेकुरामा कटौती गर्दा शरीरमा पोषक तत्वको अभाव हुन हुँदैन ।
मानव शरीरलाई स्वस्थ रहन र राम्रोसँग काम गर्नको लागि सन्तुलित आहारको आवश्यकता पर्छ । सन्तुलित आहारको सेवन गरेर मात्रै शरीरको वृद्धि विकास राम्रोसँग गर्न सकिन्छ ।
शरिरको वृद्धि विकासमा प्रोटिनको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । प्रोटिन हाम्रो शरिरको कोष र तन्तुको मर्मतका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
मानव शरीरमा प्रोटिनको कमी भएमा कोष र तन्तुको कार्य सम्पादनमा कमी आउँछ र अनेक शारीरिक समस्याहरु निम्तिन सक्छन् ।
त्यसैले हाम्रो शरीरलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ । अझै तपाईं शारीरिक श्रम पर्ने काम धेरै गर्नुहुन्छ भने त झनै प्रोटिनको आवश्यकता धेरै हुन्छ ।
शरीरको लागि धेरै नै आवश्यक हुने प्रोटिनको मुख्य स्रोतको रुपमा धेरै जसो मानिसले माछा, मासु, अण्डालाई लिने गर्छन् । हुन पनि माछामासु अण्डामा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ तर,मासु मात्रै प्रोटिनको राम्रो स्रोत भन्ने कुरा गलत हो ।
बदाम, काजू, र ओखरलगाएतका ड्राइप|mुट्स पनि प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । त्यसैले यसको नियमित सेवन गरेमा शरीरले पर्याप्त प्रोटिन प्राप्त गर्छ ।
दिपिका र रणवीरबीच आउँदो नोभेम्बरमा बिहे हुने पक्का